Ukuqokelelwa kwamanqaku ahambelana ne-ADHD, ukusuka kuvavanyo ukuya kwezona zicwangciso zongenelelo
I-ADHD kukongezwa kwesipho
Bangenelwa njani abafundi beekholeji abane-ADHD ekuphononongeni izifundo zabo?
I-ADHD iminyaka engama-20 emva kokuxilongwa. Iziphumo kwingeniso yemali
Iziphumo ze-ADHD ekusebenzeni kwesikolo
Ukunyanga i-ADHD "ngemidlalo yevidiyo"
Amehlo asendleleni: amakhadi angama-25 aneemvavanyo zokwenza ingqalelo
I-ADHD, inkumbulo elindelekileyo kunye nokubambezeleka
Ukuvela kweADHD. Luluphi utshintsho emva kweminyaka esi-7?
Ubukrelekrele, ukuqaphela kunye nokusebenza kakuhle. Yintoni eyona nto ibalulekileyo?